Dowlada Somaliya Oo Kordhinta Tababarada Ciidamada kala Hadashay Mareykanka. – Awdalmedia
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda xilgarsiinta ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa Maanta waxaa uu kulan la qaatay Saraakiil ka tirsan Taliska Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya .
Kulanka ayaa ku qotomay Xoojinta Xiriirka Milatari ee Ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka ,iyo sidii loo dardargalin lahaa howlaha tababaridda iyo taageeridda mareylanka ay siiyaan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Saraakiisha ka socotay Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa ay balan qadeen kordhinta tababarka Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Qalabeyntooda si ay u dardar geliyaan dagaalka ay kula jran Al-Shabaab.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga aya uga mahad celiyay dowladda Mareykanka kaalinta ay ka qaadanayaan howlgalka amni ee ka socda Soomaaliya & tababarka ay siiyaan Ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya ee DANAB.
Mareykanka ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga saraakiil Ciidan oo tababarayaal ah, iyaga oo Ciidamadoodii kala baxay Soomaaliya, waxaana jira duqeymo ay mararka qaar diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay ka fuliyaan meelo kamid ah Soomaaliya.